I-B&B Cote D'azur, ifulethi eliwubukhazikhazi u-S + 2 - I-Airbnb
I-B&B Cote D'azur, ifulethi eliwubukhazikhazi u-S + 2
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Foued
Itholakala kwenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Hammamet Nord, eduze nezindawo zokudlela, amahhotela endaweni yokuhlala engasempumalanga yesitezi sokuqala enekheshi. Indawo yokuhlala igadwe 24/24.
I-Panoramic Sea view kusuka ethafeni, Ifulethi linendawo enkulu yokuhlala-yokudlela, igumbi lokulala elikhulu, ikamelo lokulala elingu-1 elinemibhede emi-3, ikhishi elihlomele kahle kanye negumbi lokugezela. Ifulethi elinomoya ogcwele
I-B&B Cote D'azur iyifulethi (S + 2) elifakwe ngokucebile futhi linikezwe ukunambitheka kokuma okuphezulu elitholakala kwenye yezindawo ezinhle kakhulu ze-Hammamet Nord endaweni yezivakashi, eduze nezindawo zokudlela, amahhotela, i-Spa, Amakhasino, amagumbi etiye ... phansi phansi kwendawo yokuhlala, eduze kwedolobha: isitolo esikhulu, amabhange ...
Endaweni yokuhlala engasemanzini ukufinyelela okuqondile ukusuka efulethini ukuya kuleli bhishi elizimele, okugadiwe futhi kufakwe izambulela kuyimpahla eyingqayizivele enengadi enkulu evikeleke ngokuphelele: onogada, ama-ejenti onogada, amakhamera wevidiyo 24/24.
Konke ukufinyelela okududuzayo efulethini ngamakheshi amakhulu ama-2, okuthi
iqukethe igumbi lokuhlala elikhulu elinetafula elikhulu labantu abangu-6, ikamelo lokulala elikhulu elingu-30 m², igumbi lokulala elinemibhede engu-2 nombhede osofa wabantu abangu-2, ikhishi elihlomele kahle: i-hob, i-extractor hood, ihhavini, ifriji- ifriji, i-microwave, umshini wokuwasha, umshini wekhofi ... nendawo yokugezela.
Isikrini esiyisicaba, izintambo zesathelayithi Iziteshi zesiFulentshi ... isimo somoya egumbini ngalinye - I-TV ekamelweni ngalinye i-inthanethi ye-wifi engenamkhawulo etholakalayo, ukushisisa okuphakathi, Ukufinyelela okukhubazekile - izithombe ziyahambisana
Eduze nolwandle, zonke izinsiza, izitolo, izindawo ezikhangayo nezokuzijabulisa, amahhotela amakhulu ukufinyelela izindawo zokuphumula nezokungcebeleka: ama-saunas, ama-hammam, ama-spa SPA ...